Lacag Bixi Qormada Soomaaliya
Shakhsigaaga Bixi Qoraalka iyada oo aan lacag qarsoon la bixin. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Lacag Bixi Maqaalka - Sida Loo Maareeyo Waqtigaaga
Dhowr guji oo jiirkaaga ah, waxaad macno ahaan ugu sheegi kartaa websaydhka baahiyahaaga, daqiiqado gudahoodna, waxaad ku bixin kartaa adeegga qorista, oo isdeji adigoon ka walwalaynin tirinta ereygaaga, halkii aad qormadaada ugu qori lahayd xawaare degdeg ah oo dabka ah. Haa, waxay u egtahay mid aad ufiican in la run noqdo hada, laakiin dhab ahaantii waa run. Xaqiiqdii waad ku bixin kartaa adeegga qorista qormooyinka khadka tooska ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka bixin karto adeegga qorista qormada raaxada gurigaaga.
Adeegga qorista maqaalka, adeegyada cilmi baarista, dib u eegista, buugaagta elektarooniga ah - waxaa jira waxyaabo badan oo lagu bixiyo qorayaal xirfadlayaal ah oo aqoon u leh maaddooyinka kala duwan. Waxay kuu qori doonaan qoraalkaaga ama dib-u-eegista adiga, iyagoo ku saleynaya tilmaamahaaga gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto qoraalkaaga inuu lahaado xigashooyin ama macluumaad gaar ah, ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto fikrad ama fikrad u gaar ah. Qoraalka ama warbixinta aad qori doontid waxay noqon doonaan kuwo gebi ahaanba asal ah, maadaama qoraagu ku salayn doono oo keliya tilmaamahaaga. Haddii aad rabto inaad wax bedesho, qoraagu wuxuu kula socodsiin doonaa kahor, kahor intaadan bilaabin howsha dhabta ah.
Dad badan ayaa aad uga walaacsan qoraalladooda, kuwaas oo la qoray loona aqbalay in la daabaco; sidee ku ogaanayaan in la khayaaynayo? Waxaa jira habab la isku halleyn karo oo lagu hubinayo haddii qof uu koobiyeeyo oo adeegsanayo shaqadaada adiga oo aan ogolaansho ka haysan. Habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo haddii la khafiifiyey, waa in la raadsadaa laba ama in ka badan oo ilo ah oo adeegsada luqad isku mid ah, weedho, figrado, ama ereyo. Haddii aad dalbatid adeeg qoris curis ah, oo laga helo degel tayadiisu sarayso oo macluumaad wax ku ool ah leh, markaa waad ogtahay in shaqadaadu ay tahay mid aad u tayo sarraysa oo ay u badan tahay inay tahay mid caan ka ah daabacayaasha.
Waxaa jira qorayaal aad u tiro badan oo halkaas jooga kuwaas oo raadinaya qaabab ay ku helaan xoogaa lacag ah, taas oo ah sababta ay arday badani u doortaan inay ku dalbadaan adeegga qorista qorista khadka tooska ah. Ardaydu sida caadiga ah waxay rabaan inay qoraan hal meelood hal xilli dugsiyeed, si ay iskoolka uga bixiyaan. Tan macnaheedu waa in la qoro qoraalo badan inta ay kari karaan si loo buuxiyo waqtiyada loo qabtay. Qorayaasha qaar waxay shaqeeyaan iskood, laakiin intabadan waxay doortaan inay noqdaan qoraa tacliimeed madaxbanaan, halkaasoo lagu siin doono lacag halkii maqaal.
Si loo helo qorayaasha ugu badan ee noocan ah shaqada, waxay ahaan lahayd caqli gal in la raadsado degello leh qiime jaban. Markaad wax yar ku sameyso qoraaga, qofku wuxuu ku ogaan karaa inay yihiin qoraa tayo sare leh oo awood u leh inay la kulmaan waqtiyada loo qabtay ee ay dhigayaan macalimiintooda. Haddii macallinku codsanayo qormooyin in loo qoro iyaga, markaa qoraagu wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u fahmo mawduuca loo xilsaaray. Haddii kale, ma heli doonaan waqti ay ku bartaan mowduuca mana awoodi doonaan inay qoraan qormooyin caadooyin macno leh leh.
Markay qoraagu ku adag tahay inuu la kulmo waqtiyada kama dambaysta ah, waxay dareemi karaan inay yihiin kuwo aan wax soo saar lahayn. Waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan dhowr mashruuc oo kala duwan hal mar, taas oo ka dhigi karta inay soo daahaan. Markaad ka hesho qorayaal bogaggan heer jaamacadeed, hase yeeshe, waxay badbaadin karaan waqti badan. Inta badan dadka wax u qora goobahan adeegga maqaalka xirfadeed waa borofisar laftooda, kuwaas oo leh arday u baahan caawimaad dhammaystirka mashaariicdooda ugu dambeysa. Maaddaama mawduucyadu ay inta badan la xiriiraan aagga barashada ee borofisar, sida caadiga ah sifiican ayey u yaqaanaan aagga waxayna si sax ah u yaqaanaan waxa la sameeyo.
Ardaydu waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan isticmaalka websaydhadan haddii ay haystaan ​​waraaqo badan. Sida ugu dhakhsaha badan ee ay u dhammeeyaan inta badan shaqada, sida ugu dhakhsaha badan waxay u heli doonaan waqti ay ku aadaan kan xiga. Haddii ay isku dayaan oo ay qoraan waraaqo badan kaligood, way illoobi karaan qaybo ka mid ah maaddada. Waxa ugu dambeeya ee borofisar rabaa waa inuu ardaydooda siiyaa waraaqo badan oo taariikhi ah sababta oo ah waqti uma helin inay ku bartaan macluumaadka. Tani waxay kaliya ku sababi doontaa iyaga shaqooyin badan wadada. Helitaanka hab la awoodi karo oo loogu qoro qormooyinka iyaga ayaa noqon kara jawaabta.
Qaar badan oo ka mid ah barahaasi waxay kaloo leeyihiin aalado la heli karo si ay uga caawiyaan qoraaga inuu abaabulo. Qoraa wuxuu jeclaan doonaa habka u fududeynaya noloshooda. Iyadoo la abuurayo liis hubin ah oo ku saabsan waxa loo baahan yahay in lagu sameeyo qayb kasta oo ka mid ah qormada, waxaa si fudud loo fududeeyay in lagu sii socdo wadada oo la buuxiyo waqtiga kama dambaysta ah. Dabcan, had iyo jeer waxaa jira xalka ugu dambeeya, oo ah in lala xiriiro borofisar kasta oo loo sheego waxa ugu dambeeya ee howsha loo dirayo. Waxay ku qaadan kartaa iyaga maalin ama wax la mid ah inay kula soo noqdaan, laakiin markii ay sidaa sameeyaan, way fududaan doontaa inaad la kulanto waqtiga kama dambaysta ah oo aad ku dhammaystirto hawsha waqtigeeda. Markaad ka hesho qorayaasha maqaalka degelladaan, halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa lacag ka qaata, ardayda waxay awoodi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​ilaha fudud ee internetku siiyo qorayaasha.